Nahoana ny Adobe Flash no tokony ho lasa Source Source? | Famoronana an-tserasera
Nahoana ny Adobe Flash no tokony ho lasa Source Source?
Na ho ela na ho haingana ny vaovao an'ny fanjavonan'ny Adobe Flash 2020, saingy mitranga izany fa misy ireo maniry hanome azy fotoana faharoa.
Ny hevitra tany am-boalohany dia ny hanaterana ity tetikasa ity any amin'ny vondrom-piarahamonina open source, miaraka amin'ny tanjona fa hatramin'izao dia ny developer tsy miankina dia ireo izay miandraikitra fa mbola misy ny flash ary izany ve no antony nametrahan'ny sasany ny fanontaniana hoe?misy dikany izany?
Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka antony telo manohana antsika isika ary antony telo manohitra ny antony tokony hahatongavan'i Adobe Flash ho loharano misokatra?
Nanangana fampielezan-kevitra somary manokana ny mpamorona finnish fantatra amin'ny anarana hoe Juha Lindstedt ny ampitson'ny nametrahan'ny Adobe azy daty fahatapahana ho flash. Ho an'ity mpanjifa ity, ny Flash dia maneho sombin-javatra tena lehibe eo amin'ny tantaran'ny Internet ary ny fanjavonany dia mety hidika fa tsy hanana fidirana amin'ny lasa ny taranaka ho avy.
Ny fanangonan-tsonia napetraka tao amin'ny Githud dia nahazo sonia maherin'ny 3700, izany hoe ireo olona nanoritra tsipika ity kintana ity ary raha ny momba an'i Lindstedt dia nilaza izy fa misy antony maro tena zava-dehibe ny fahaizana mitahiry azy.
Ary mazava ho azy, ao amin'ny pejy Githud dia hazavaina hoe ahoana no mbola misy be dia be tetik'asa amin'ny sehatry ny kanto na lalao video izay asan'ny asan'ny Flash manaporofo ny lanjan'izany. Etsy ankilany, misy ihany koa ny fandrosoana amin'ny Open Source izay, toa mihidy o Lightspark Nanolotra fomba hafa hanohizana hiara-miasa amin'ny Flash mandritra ny fotoana ela izy ireo, ary izany dia ferana amin'ny loharanom-baovao mihidy sy ny tompon'ny tetikasa.
1 Antony manohana
2 Antony manohitra
Azontsika atao ny manomboka amin'ny antony manohana ny antony tokony hahatongavan'i Adobe Flash Open Source? Ary etsy ambany no ilazantsika ny telo amin'izy ireo:
Mitandrina Flash ho an'ny tantara: Araka ny nohazavain'i Lindstedt tenany, ny Flash dia teknolojia iray tsy izy irery ihany dia iray amin'ireo andrin'ny evolisiona avy amin'ny tranonkala, fa mbola ampiasaina ihany koa amin'ny lalao, fanandramana ary tranokala sasany. Ity karazana fanovana ho tetikasa Open Source ity dia afaka mamela ny fahafahany miditra amin'io lasa io.
Fanatsarana ny fiarovana: Tombontsoa iray hafa izay mety manatsara ny fanovana ny Flash ho Open Source dia hita fa manana ny karazana developer rehetra fahaizana manadihady sy manombana kaody afaka manatsara azy ary manitsy izay karazana teboka malemy.
Fiarovana amin'ny endrika maoderina: na dia manome fitaovana ahafahana manao aza ny adobe mamindra ny atiny Flash amin'ny maodely misokatra sy maoderina hafaRaha lasa ampahany amin'ny Source Open i Flash dia mety hisy ihany koa ny ezaka vaovao, toy ny fahitana antoka fa io asa io dia azo atao amina endrika hafa miseho aorian'ny fanjavonan'ny Flash.
Na dia efa nilaza antony manohana ny avadika Flash ho Open Source, iray amin'ireo antony lehibe indrindra satria nanjary olana ara-piarovana ho an'ny mpampiasa marobe izy io, ity sy ny roa hafa dia azo lazaina:
Olana amin'ny fiarovana: ny fahalemena hita tamin'ity teknolojia ity dia be, ary ny zava-misy amin'ny famoahana ny tetikasa mankany Source Source mety tsy hahomby izy io, ka ho an'ny Flash sasany dia mety ho sarotra be ny mitahiry azy ary mahatonga azy io ho safidy azo antoka.
Efa misy safidy hafa: ny hafa toa HTML5 dia afaka nanamboatra vitsivitsy tamin'ireo fiasa natolotry Flash, noho ny teknolojia maoderina.
Tsy mila Flash ireo mpikaroka: Ireo tompon'andraikitra amin'ny mpitety tranonkala lehibe toa Chrome na Firefox, dia naneho fa vonona ny hijanona tsy hanohana an'i Flash intsony izy ireo amin'ny taona faramparan'ny taona 2020 ary toa tsy azo inoana fa hanova an'io hevitra io ny hitsambikina amin'ny Source Source.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Nahoana ny Adobe Flash no tokony ho lasa Source Source?
Inona ilay "Githud"?
Valiny tamin'ny mpanoratra
Izy io dia mitovy amin'ny Git, rafitra fizarana fifehezana ny kaody loharano na SCM (amin'ny fitantanana kaody Source Source English).